NASDAQ Chief: Crypto tahay talaabada saxda xiga ee intii lacagta
Madaxa fulinta Nasdaq Adena Friedman hadlay cryptocurrency qaybtii ugu dambaysay ee podcast CNN Boss Files, Friedman sheegay in cryptocurrency dareemeysaa "tallaabo xaq u xiga ee intii lacagta" sababtoo ah a "hab lacag caalimiga" waa taam ah dabiiciga ah ee dhaqaalaha digital xuduudka isaga gudba.
Waxa ay sheegtay in: "Sida ay u fiddo iyo taas oo ka mid ah cryptocurrencies ayaa laga yaabaa ama ma laga yaabaa in mid ka mid ah in ugu dambeyntii uu isku duubay, Waxaan qabaa in si dhab ah xeerbeegtida ayaa wali ka maqan in. Laakiin waxaan qabaa fikrad ah ee farsamo dheeraad ah caalimiga bixinta waa ku ool ah ka badan waxa aan maanta heysano u oggolaanaysa in lacag si ay u gudbiyaan guud ahaan dal iyo sida xaqiiqada ah waxay taageertaa dhaqaalaha internetka. "
ganacsi Stock app Robinhood kicisaa dheeraad ah $ 363M si loo ballaariyo adeegyada ay ganacsi crypto
app ganacsiga stock mobile US salaysan Robinhood ayaa ku dhawaaqday a $363 milyan oo taxane D maalgelin ku wareegsan oo u sheegay in ogolaan doonto in shirkadda in ay ballaariso adeegeeda ganacsi cryptocurrency ay dalka oo dhamaadka 2018.
Sida laga soo xigtay war qoraal ah oo lagu daabacay on Thursday, wareega deeq qiimeeyo adag ee $5.6 billion.
De qamri si guul leh raad dheeman anigaa ka dahabluhu isticmaalaya blockchain
De qamri Group ayaa maanta ku dhawaaqday in ay si guul leh u xiiseeyaan 100 dheeman weheliyaan silsilad qiimaha lagu jiro pilot ee ay madal blockchain warshadaha, sixitaanka markii ugu horeysay safar dheemman ayaa dijital ah loo wasakheeyey ka malihi inaan tafaariiqda.
raad digital An aan beddelmi karin oo ammaan loo abuuray oo xul ah ee dheeman ka da.ay miino by De qamri sida ay ka anigaa si magaabay wiil iyo polisher dhaqaaqay, ka dibna ilaa dahabluhu. madal, loo yaqaan Tracr, ayaa la filayaa inuu si cad ka dib bilowdo sanadkan.
Maal Crypto Mike Novogratz: Crypto waa kacaan dadka
“Kani waxa uu ahaa kacaan dadka,” Michael Novogratz ee Galaxy Digital u sheegay dadkii badnaa oo jooga shir isbeddello ee Brooklyn on Thursday.
Waxa uu sheegay in “Kacaanku baahsan la doonayo inuu qabto saamaynta ugu weyn ee dareenka tafaariiqda, laakiin ay halkaas ka heli waxay qaadan doontaa awood-gashiga oo ka mid ah hay'adaha weyn ee. lo 'ah hay'adaha waa ku biiro,” isagoo intaa ku daray “dheeraad ah oo fiican ayaan u ahay sannadkan ka badan waxaan ahaa sannadkii la soo dhaafay.”
Noocooda mashruuca gaarka ah “løvetann” horumariyo by devs Seeraar
Horumarinta rajeyneysa inay keenaan heerka sare ah ee magaciisa la macaamilka in blockchain Seeraar ayaa dhisay noocooda ah ee ay “løvetann” mashruuca gaarka ah.
noocooda wuxuu wax ka qabanayaa welwel in soo jeedinta bilowga ah ee løvetann waxaa laga yaabaa in loo soo bandhigin weerar deanonymization a.
Guddoomiyaha asbiriin ...
Binance qaadanay qorshaha Bui ...
Post Next:Axe Trading for Cryptotrading